Home Wararka Kooxda Qaaqlayaasha oo mid mid uga sii baxsanaya RW Kheyre
Kooxda Qaaqlayaasha oo mid mid uga sii baxsanaya RW Kheyre
RW Kheyre iyo Fahad Yasin ayaa waxa ay dhaqaale badan oo laga dhacay shacabka Soomaaliyeed ku abuureen kooxo loogu magacdaray Kooxaha Qaaqlayaasha oo ujeedada laga lahaa ayaa ahayd in ay baraha bulshada ka caayaan siyaasiyiinta iyo cid alaale cidii mucaarad ku ah dowlada uu hogaamiyo Madaxweyne Farmaajo.
Sadaxdii bilood ee u danbeeysay ayaa waxa bilaawday burbur ku yimid kooxdaan oo mar qura isku rogay mucaarad ka dhan ah dowlada Farmaajo. Qaarkood ayaa si toos ah u soo dhigay baraha bulshada dareenkooda halka kooxo kale oo wali lacag ka qaata dowlada ay furteen baro cusub iyo shabakado ay ku qoreen magacayo kala duwan.
Tani ayaana astaan u ah burbur ay ku soo socdo kooxda Nabad iyo Nolo oo aad moodo in albaabada gudaha iyo dibadaba ka soo xirmayaan.
Dhanka kale Madaxweynihii Shiikh Sharif Shhikh Axmed oo doonayo in uu dhawaan ku dhawaqo xisbi ayaa bilaabay in uu dib isugu ururiyo kooxo isaga horay ugu shaqaysan jiray oo loo yaqaan madadaalayaasha. Waxa uu dhawaan u magacaabay madaxa abaabulka ee xisbiga Cali Daacuun halka Cabdicasiis Xildhibaan loo magacaabay madaxa warbaahinta ee xisbiga.
Previous articleAMISOM hands over newly constructed police station to Jubbaland authorities
Next articleUAE and India agree to collaborate on African aid projects – starting with Ethiopia’s IT centre of excellence
Maamulka Jubaland oo maanta fulisay Xukun dil ah